FITSIRIHANA TANY ATAON’NY KAOMININA MAHAJANGA : Efa vita ny 40% amin’ireo antontan-taratasy voapetraka
Taorian’ny fisokafan’ny fitsirihana tany dia 40% ny antontan-taratasy azon’ny kaominina no efa nisy fidinana ifotony. 15 mai 2019
Niato nandritry ny fotoana maro izy io teto Mahajanga saingy efa mandeha ara-dalàna ankehitriny. Tsy amaritana ny fananan-tany ny fitsirihana fa fizahana ny mombamomba ny tany. Maro ny zavatra jerena amin’ny fitsirihana, ka misy komisiona misahana izany, azo avy amin’ny sampan-draharaha maro.
Ao anatin’izany ny famantarana ny toerana misy ilay tany angatahana. Fantarina koa raha efa misy titra na baorina. Jerena raha efa nisy nangataka teo aloha. Azo anorenana trano sa tsy azo. Rehefa mazava ireo rehetra ireo dia atao ny fitanana an-tsoratra izay ampiarahina amin’ny antontan-taratasy fangatahana tany.